Somalia | Atlante - notizie da tutto il mondo in tempo reale e lingua originale
Somaliland Today - Sab, 21/05/2022 - 8:20am
(SLT-Burco)-Guddoomiyaha Xisbiga WADDANI MD Xirsi Cali Xaaji Xasan ayaa saaka qaar ka mid ah dadweynaha Burco kula shaaheeyay miiska siyaasadda lagu falanqeeyo ee maqaaxida shaaha ee Cirro.
Guddoomiyaha iyo bulshada ayaa si qoto dheer isaga xaal waraystay siyaasadda iyo xaaladda guud ee dalka, islamarkaana si kal furan isu waydaarsaday kaftan siyaasadeed iyo qorshaha xisbiga ee doorashada Madaxtooyada 13 Nov.
Guddoomiyaha waxa wehelinayay xoghaye ku xigeenka xisbiga MD Jamaal Jaamac Xaamud, Xoghayaha Amniga MD Ibraahin Ducaale Boos, Xoghayaha biyaha MD Bashiir Cumar Geelle, xildhibaanno ka tirsan golaha deegaanka iyo masuuliyiin kale.
Somaliland Today - Sab, 21/05/2022 - 8:07am
(SLT-Gabiley)-Arreh Souleiman Aouled Arreh, oo si weyn u dhaliili jiray madaxweynaha Jabbuuti Ismaaciil Cumar Geelle, ayaa lagu xidhay Gabilay.
Muuqaal uu soo duuubay ayuu Arreh, kaga codsaday shacabka Somaliland in laga hortago in dawladda Jabbuuti loo gacan geliyo.
Arreh, ayaa asal ahaan ka soo jeeda Jabbuuti, balse beryahan dambe waxa uu ku sugnaa gobolka Gabilay isagoo Face Book-giisa soo gelin jiray muuqaallo uu ku codsanayo in Geelle, xukunka ka dego.
Dad reer Somaliland ee baraha bulshada wax ku qora ayaa si weyn uga soo hor-jeestay xadhiga Arreh Souleiman Aouled Arreh iyaga xukuumadda Somaliland uga digay in loo gacan-geliyo dawladda Jabuuti.
Somaliland Today - Ven, 20/05/2022 - 10:08pm
Somaliland Today - Ven, 20/05/2022 - 9:23pm
Hore waan u sheegay hadana waan sheegayaa: midnimada, wadajirka, iyo wax wada lahaanshaha Somaliland waxan u arkaa in ay ku jirto midnimada Burco. Ilaahayna sida roon ha waafajiyo.
Madaxwayne Muuse ka hor intii aanu dhamaanin sanadkii hore wuxu inoo sheegay in sadex doorasho ay dalka ka qabsoomayaan, sida ay u kala horeeyaana loo kala qabanayo oo mid walba ay wakhtigeeda ku qabsoomi doonto. Maanta mid lama hadal hayo labadii kale in ay mid ahaani qabsoomi iyo in labaduba ay meesha ka wada bixi ayaa werwerka ugu wayni yahay. Hadii doorashada keliya ee la isla wada ogol yahay wax ka dhiman oo wakhti ahayni jirin ay qabsoomi waydo ru kale oo ka horaysa ama ka dambaysa oo qabsoomi kartaana ma jirto. Markaa madaxwayne Muuse ayay hadda kubbadu la taal in uu dalka ka badbaadiyo khilaaf siyaasadeed oo meel uu inala gaadhi aan la garanayn iyo god madow ku ridi talada Somaliland labadaa mid uun bay noqon eh aan sugno inta meel cad uu isu keen taagayo.
W/Q Mujaahid Cali Maxamed Yuusuf (Cali Guray)
Somaliland Today - Ven, 20/05/2022 - 12:45pm
Somaliland Today - Ven, 20/05/2022 - 10:14am
Somaliland Today - Gio, 19/05/2022 - 9:42am
Somaliland Today - Gio, 19/05/2022 - 9:26am
(SLT-Hargeysa)-Xuska sannnad-guuradii 31aad ee ka soo wareegtay markii Somaliland xornimadii ka luntay dib ula soo noqotay 18-kii May 1991-kii ayaa maanta si weyn looga xusay Gobolada iyo degmooyinka Somaliland.
Dadweynaha reer Somaliland ee ku nool gobollada iyo degmooyinka dalka ayaa sannadkan si weyn uga qayb-qaatay xuska 18-ka may, Halkan hoose ka DAAWO muuqaalada gobollada iyo degmooyinka dalka
Somaliland Today - Gio, 19/05/2022 - 9:03am
Somaliland Today - Mer, 18/05/2022 - 10:52pm
Somaliland Today - Mer, 18/05/2022 - 9:54pm
“Xasan Sheekh Maxamuud waxaan leeyahay waar horumarka noogu duceeya..” Guddoomiyaha Guurtida
Somaliland Today - Mer, 18/05/2022 - 9:51pm
“Madaxweyne, waxa laga doonayaa in duruufaha Waddanku marayo aad ku wajahdo waayeelnimo” Guddoomiye Cabdirisaaq Khaliif.
Somaliland Today - Mer, 18/05/2022 - 9:48pm
TOOS U DAAWO Xaflad Ballaadhan Oo Ay Xisbiyadda Mucaaridka UCID Iyo WADDANI Ugu Dabaal-degayaan 18-ka May
Somaliland Today - Mer, 18/05/2022 - 8:07pm
TOOS U DAAWO Xaflad Lagu Xusayo 18-ka May Oo Caawa Ka Socota Madaxtooyadda Somaliland
Somaliland Today - Mer, 18/05/2022 - 8:01pm
Somaliland Today - Mer, 18/05/2022 - 3:41pm
Finland iyo Sweden oo si rasmi ah u codsaday ku biirista NATO xilli ay waajahayaan diidmada Turkiga
Somaliland Today - Mer, 18/05/2022 - 3:34pm
Finland iyo Sweden ayaa si rasmi ah maanta u codsaday inay xubno ka noqdaan gaashaanbuurta NATO, hase yeeshee waxay waajahayaan diidmada dalka Turkey.
“Tani waa daqiiqad taariikhi ah, oo ay tahay inaan ka faa’iideysano,” waxaa sidaas yidhi xoghayaha guud ee NATO Jens Stoltenberg oo ka hadlay munaasabad ay safiirada dalalkan ku gudbiyeen codsiga oo ka dhacday xarunta NATO ee Brussels.
“Waxaan si diiran usoo dhoweynayaa codsiyada Finland iyo Sweden ay ugu biirayaan NATO. Waxaad tihiin saaxiibadeena ugu dhow, islamarkaana ku biiristiina NATO waxay kordhin doontaa amniga aan wadaagno,” ayuu yidhi.
Si kastaba, labadan dal ayaa waajahaya bilo hubanti la’aan ah oo ay tahay inay ka guuleystaan iska caabinta ka dhanka ah codsigooda, ayada oo ay qasab tahay in dhammaan 30-ka dal ee xubnaha ka ah NATO ay ogolaadaan.
Turkey ayaa maalmihii dhowaa muujisay sida ay uga soo horjeedo xubinnimada Sweden iyo Finland, ayada oo sheegtay in labadan dal ay gabbaad siiyaan shakhsiyaad xidhiidh la leh urur argagixiso, ayna sidoo kale cunaqabateyn hub saareen Ankara kadib duulaankii ay ku qaaday Syria 2019.
“Waxaa naga go’an inaan ka shaqeyno dhammaan arrimahan oo aan gaadhno go’aan deg deg ah,” ayuu yidhi Stoltenberg.
TOOS U DAAWO Xuska 18-ka May Somaliland
Somaliland Today - Mer, 18/05/2022 - 6:22am
Somaliland Today - Mar, 17/05/2022 - 7:55pm
(SLT-Hargeysa)- Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa hore u sheegay inuu kamid ahaa dhibaatooyinkii haystay ee ay ka socon weyday Xukuumaddii Madaxweyne Riyaale, waxaanu fagaare ka sheegay inuu kamid ahaa caqabadii diidanaa inay hore u socoto Dawladii Madaxweyne Daahir Riyaale Kaahin.
Somaliland Today - Mar, 17/05/2022 - 7:36pm